TUMIRA MUFANANIDZO KUBURIKIDZA NEEMAIL KANA MESEJI MESEJI PANE ANDROID - NYORO
Tumira Mufananidzo kuburikidza neemail kana Meseji Meseji pane Android
Dzimwe nguva meseji yakapfava haina kukwana. Kuti unyatsoburitsa meseji uye kuburitsa manzwiro, iwe unofanirwa kubatanidza mufananidzo pamwe nawo. Kutumira mafoto kana mavhidhiyo kuburikidza nemeseji kwakakurumbira uye kunozivikanwa se Multimedia mameseji . Kunze kwaizvozvo, zvinokwanisika kutumira mapikicha kune mumwe munhu pane yavo email kero. Chinhu chakanakisa kuita kutumira mifananidzo yatove yakachengetedzwa pafoni yako. Muchikamu chino, isu tichazopa nhanho-nhungamiro yekutumira mufananidzo kuburikidza neemail kana meseji.
# 1 Kutumira Mufananidzo kuburikidza neMeseji Meseji
# 2 Kutumira Mufananidzo kuburikidza neemail
# 3 Kutumira Mufananidzo kubva kuApp gallery
Unofanira kugara uchidaro tsigira yako Android foni usati waita chero kugadzirisa matambudziko, kungoitika, kana chimwe chinhu chikaitika saka unogona kugara uchidzorera foni yako kubva ku backup.
Kana iwe uchida kutumira pikicha kuburikidza nemavara, saka unofanirwa kutanga nekunyora chinyorwa sezvaunowanzoita uye unamate mufananidzo kubva kune yako gallery pamwe nawo. Tevedza nhanho dzakapihwa pazasi kuti uone kuti:
1. Kutanga, vhura iyo mune-yakavakwa Android Messaging app pafoni yako.
2. Zvino, tinya pane iyo Kutanga Chat sarudzo yekugadzira nyowani mameseji tambo.
3. Tevere, uchafanirwa wedzera nhamba kana zita rekutaurirana muchikamu chakatemerwa Vagashiri.
yemunharaunda nharaunda kubatana haina basa
4. Paunenge uchinge uri mukamuri yekutaura, tinya pane iyo kamera icon pasi pechiso.
5. Pane nzira mbiri dzaunogona kutumira pikicha; unogona kushandisa kamera kudzvanya a mufananidzo panguva iyoyo kana tora pa gallery sarudzo kutumira mufananidzo uripo.
google chrome yamira kushanda windows 10
6. Kana mufananidzo wasungirirwa, unogona sarudza kuwedzera chimwe chinyorwa kwariri kana iwe uchinzwa kuda kwaro.
7. Mushure maizvozvo, tinya pane iyo Tumira bhatani, uye MMS ichatumirwa kumunhu ane chekuita.
Uyezve Verenga: Gadzirisa Dambudziko Kutumira kana Kugamuchira Chinyorwa pane Android
Iwe unogona zvakare kutumira mifananidzo kune mumwe munhu kuburikidza neemail. Kana iwe uri kushandisa iyo Android chishandiso, saka unofanirwa kunge uri kushandisa Anwendung kune yako email sevhisi. Mune ino kesi, isu tiri kuzoshandisa iyo Chishandiso cheGmail kutumira mufananidzo kune mumwe munhu pane yavo email kero. Tevedza nhanho dzakapihwa pazasi kuti uone kuti:
1. Kutanga, vhura iyo Chishandiso cheGmail pafoni yako.
iTunes haina kukwanisa kubatana neiyi ipad. kukanganisa kusingazivikanwe kwakaitika 0xe80000a
2. Zvino, tinya pane iyo Nyora bhatani kutanga kutaipa email nyowani.
3. Pinda iyo email kero yemunhu kuna waungade kutumira iwo mufananidzo kumunda wakanyorwa sa 'Ku.'
4. Kana uchida, unogona wedzera chidzidzo kutsanangura chinangwa chemashoko.
5. Kubatanidza mufananidzo, tinya pane iyo Pepa clip icon kurudyi-kurudyi ruoko rwechidzitiro.
6. Mushure maizvozvo, tinya pane iyo Batanidza File sarudzo.
7. Zvino, iwe unofanirwa kutarisa kuburikidza nekuchengetedza kweye kifaa chako uye nekutsvaga iyo pikicha iyo yaungade kutumira. Tinya pane iyo Hamburger icon kumusoro kwekuruboshwe-ruoko yeiyo skrini kuti uwane iyo Folder maonero.
windows 10 kudzoreredza yekuvandudza rairo tambo
8. Pano, sarudza iyo Garari sarudzo.
9. Yako mifananidzo gallery ichave yakavhurika, uye unogona kusarudza chero mufananidzo waungade kutumira. Kana iwe uchida, iwe unogona kunyange kutumira akawanda mifananidzo kamwechete.
10. Mushure maizvozvo, wedzera rumwe rugwaro kana uchida, wobva wadzvanya pane Tumira bhatani, yakaumbwa semusoro wemuseve.
Iwe unogona zvakare kugovana zvakananga mifananidzo kubva kune yako gallery uye sarudza chero email kana mameseji sekuchinjisa modhi. Tevedza nhanho dzakapihwa pazasi kuti uone kuti:
1. Chinhu chekutanga chaunofanirwa kuita kuvhura iyo Garari app .
2. Tevere, sarudza iyo Album umo mufananidzo unochengetwa.
3. Bhurawuza kuburikidza ne gallery uye sarudza mufananidzo iyo yaunoda kutumira.
4. Zvino, tinya pane iyo Goverana bhatani pazasi kwekona.
windows 10 inoramba ichirasa internet
5. Iwe zvino uchapihwa ne dzakasiyana siyana dzekugovana sarudzo izvo zvinosanganisira zvese email uye mameseji. Tinya pane chero nzira yakakodzera iwe.
6. Shure kwaizvozvo, ingosarudza iyo zita, nhamba, kana email kero yemunhu iyo iwe yaunoda kutumira meseji kune, uye pikicha ichaendeswa kwavari.
Maitiro Ekuwedzera Evanhu Vako Kadhi paGoogle Kutsvaga
Gadzirisa Gmail isingagamuchire maemail pane Android
13 Yakanakisa Yemahara Yemahara password password Software (2020)
Kutumira mifananidzo kuburikidza neemail kana mameseji inzira iri nyore yekugovana midhiya mafaera. Nekudaro, pane zvimwe zvausingakwanise zvaunoda kurangarira. Paunenge uchitumira mifananidzo kuburikidza neemail, saka haugone kutumira mafaera akakura kupfuura 25 MB. Iwe unogona, zvakadaro, kutumira akawanda akateedzana maemail kutumira ese mapikicha iwe aunoda kuti agovaniswe. Panyaya yeMMS, iyo saizi saizi muganho inoenderana nemutakuri wako. Zvakare, iye anogamuchira meseji anofanirwa zvakare kuve anokwanisa kugamuchira MMS pane avo zvishandiso. Chero bedzi iwe uchitarisira izvi zvidiki zvehunyanzvi, iwe wakanaka kuenda.
windows 10 kugadzirisa bluetooth isipo
system uye yakadzvanywa ndangariro yakakwira cpu kushandiswa
radeon marongero ekushandira application akamira kushanda windows 10
mushure mewindows yekuvandudza komputa inoramba ichitangazve
ficha yekuvandudza kune windows 10 vhezheni 1903 yakanamatira
bluetooth haina kuonekwa munzvimbo yekuita